किन लुकिछिपी विहे गरिन यी दुई हिरोइनले ? – Namaste Filmy
किन लुकिछिपी विहे गरिन यी दुई हिरोइनले ?
[dropcap]प[/dropcap]छिल्लो समय फिल्म इन्डष्ट्रिमा उदाउदा दुई हिरोइन ले सुटुक्क विवाह गरेका छन । नायिका द्धय श्वेता भट्टराई र प्रकृति श्रेष्ठले मिडिया र फ्यानहरुलाई थाहा नै नदिई विवाह गरेका हुन । स्वेताले ब्यापारी मिलन सापकोटासँग प्रेम विवाह गरेकी हुन । उनको विवाह केहि दिनअघि नै सिमित पारिवारिक जमघटमा भएको बुझिएको छ । चलचित्र ‘रिदम’ बाट फिल्ममा देखिएकी स्वेता ‘प्रोडुसर’ फिल्मबाट चिनिएकी थिइन ।
त्यस्तै सम्भावना बोकेकी अर्की हिरोइन प्रकृति श्रेष्ठले पनि सुटुक्क विवाह गरेकी छिन । उनले अष्ट्रेलिया बस्दै आएका प्रेमी सुदिप न्यौपानेसँग विवाह गरेकी हुन । प्रकृति र सुदिप लामो समयदेखि नै रिलेशनसीपमा रहेको बुझिएको छ । सुदिप करिब एक महिना अघि विवाहकै लागी नेपाल आएका थिए । प्रकृति कयौ म्युजिक भिडियो हुदै ‘होस्टेल’बाट फिल्ममा डेब्यु गरेकी हुन । उनी अभिनी फिल्म ‘उत्सव’ रिलिजको तयारीमा छ ।
यसरी नाम चलेका र दर्शकको रोजाईमा परिरहेका नायिका ले किन लुकिछिपी विवाह गरिन त ? यो उनीहरुलाई नै थाहा होला । तर विवाहपछि फिल्ममा जम्न नसकिने डरले ब्यक्तिगत कुरा भन्दै विवाहलाई लुकाउन खोजिएको धेरैको भनाई छ ।
हट देखिनको लागी सेलेनाले गराइन ब्रेस्ट सर्जरी ।
फेवातालमा छाल आएपछि झन्डै डुबेन गजित र अनु ।